Yini okufanele abagibeli bamabhayisikili bayidle ukunciphisa umzimba? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Ukudla okuhamba ngebhayisikili - sesha izixazululo
Ukudla okuhamba ngebhayisikili - sesha izixazululo
Yini okufanele abagibeli bamabhayisikili bayidle ukunciphisa umzimba?
Amafutha-busting ye-abagibeli bamabhayisikili: uphilileukudlangobaukuncipha komzimba
Uhlobo lwenhlanzi. Ilungele lokhu: Le nhlanzi igcwele izakhi zomzimba ezibalulekile ngakho-ke inkulu kakhulu yokwanelisa indlala yakho isikhathi eside, futhi inama-calories aphansi.
Ukudla okunomsoco kuyingxenye ebalulekile yanoma yiluphi uhlelo oluhlelekile lokuzivocavoca umzimba. Kepha ingabe ukukhohlisa kokudla kukodwa kungaba nomthelela osebenzayo ekuzivocavoceni kwakho? Ukuze siphendule lo mbuzo ngqo, sikhuluma noJames Morton, iNhloko Yezondlo e-Team Sky eGiro d'Italia. (Geza) Ngakho-ke James, endimeni yakho njengoChief Nutritionist kuTeam Sky, ukusebenzisa kanjani lokhu kudla kuhlangene nabaqeqeshi noqeqesho ukuze abagibeli behlise isisindo empeleni? Ngoba kungenye yama-grails angcwele okuhamba ngebhayisikili, akunjalo? Ngabe isilinganiso samandla kusisindo, okusho ukuthi ukukhanya ngangokunokwenzeka, kepha sigcine ukusebenza okuhle.
Manje yiziphi izindlela? - Yebo, ngicabanga ukuthi inkinga yama- $ 64 million yokuhamba ngebhayisikili akudingeki ibe nzima njengoba abantu becabanga. Ekugcineni, kubuyela kubhalansi yamandla. Ngakho-ke uma abantu befuna ukunciphisa umzimba, kufanele basebenzise amandla amaningi kunalawo abawasebenzisa ngempela.
Ubunzima ngalokhu, kunjalo, ukuthi laba bantu baqeqesha izinyanga eziyisithupha ngomcimbi we-peak s eason ngakho-ke kufanele ubekelwe isikhathi futhi awukwazi ukwehlisa isisindo ngokushesha okukhulu futhi kusenesikhathi kakhulu noma uzosha. Ngakho-ke kuyindlela yesinyathelo ngesinyathelo. Sizama isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha.
Sikhomba izinhlobo zezinhloso zokwehlisa isisindo esizifunayo ngezikhathi ezithile zesizini, kepha-ke ingxoxo yokuqala ibandakanya umqeqeshi nomshayeli, futhi sidinga ukuhlela izikhathi ezifanele ngenkathi uma sikhona, noma izinsuku ezifanele iviki lize lifike ezingeni lapho siziqeqesha khona kanzima. Noma ngezinsuku lapho umfutho ungekho phezulu kangako futhi ungakwazi ukukhokhela ukusilela kwekhalori ngalezo zinsuku. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi indlela yokudla-by-isidlo, indlela yansuku zonke.
Futhi lokho sikwenza masonto onke. - Yebo. - Futhi sisezingxoxweni masonto onke ukuqinisekisa ukuthi kufanele sigcwalise izinsuku lapho sidinga khona, ukugcwalisa kahle, futhi ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ubiza ngamabomu ngaphansi kukaphethiloli ngezinsuku lapho ungahle ube uphethiloli ngamabomu .
Futhi ngaphezu kwezinsuku eziyisikhombisa wakha ukushoda kwekhalori ku-cit. (Iyavela) Njalo ngenyanga wakha ukusilela kwakho kwekhalori bese uyakudla kancane kodwa ngokuqinisekile uyethemba ngosuku lokuqala lomncintiswano wakho ophezulu ufika esimweni esihle kakhulu sesizini. - Kuyangijabulisa ukuthi umshayeli uzilinganisa kangaki? Ngisho ekhaya.
Ngisho, ngiyazi, ohambweni olukhulu ngoba Ukwehla kwamanzi emzimbeni kanye ne-Stuffrider kukalwa nsuku zonke ngoba nakanjani ukugcina ibhalansi kubalulekile, ikakhulukazi ngombono we-hydration. Hhayi Kakhulu Kulahleka Kodwa uthi uthole umshayeli elahlekelwa ngamakhilogremu amabili ngokuzithandela, ngabe lowo mshayeli uzodinga ukukalwa nsuku zonke noma kungaba njalo ezinsukwini ezimbalwa? Ungalusingatha kanjani lolu hlangothi lwezinto? - Yebo, futhi, kukodwa, kucacisiwe. Ngisho ukuthi laba bantu abawona amarobhothi, uyazi ukuthi nabo bangabantu.
Futhi kufanele ubaphathe njengabantu, abawona amarobhothi. Ngakho-ke konke kubuyela kulezo zikhathi ezinzima lapho sifuna ukwenza lokhu. Futhi esigabeni esishubile esingaba amasonto amahlanu, ayisithupha, ayisikhombisa, ayisishiyagalombili, akuvamile ukuthi abashayeli bazilinganise njalo ekuseni nasebusuku.
Futhi impela siyakukhuthaza. Lapho bekwenza kaningi, kulapho sifunda ngokwengeziwe ukuthi basabela kanjani kokuhlukile. Kepha okubaluleke kakhulu, kulapho bafunda khona kakhulu.
Futhi uma usufunde futhi wazibophezela ngakho, lokho kuyisinyathelo sangempela sokuya phambili - ngiqonde ukuthi, ngokuya ngokudla uqobo, ngicabanga ukuthi unamathela kukho, ngokwamaprotheni kanye nama-carbohydrate, uyawandisa amaprotheni, wehlisa ama-carbohydrate? Ngiqonde ukuthi usebenzisa luphi uhlobo noma imvume? Ngisho ukuthi iyiphi isayensi engemuva kwendlela engcono yokwehlisa isisindo? Ngoba kunokucabanga okuningi ngale ndaba ethile. - Yebo. Yebo, ngicabanga ukuthi ushaye isipikili ekhanda.
Sesixoxe ngalokhu iminyaka engama-20. Futhi isikhathi eside. Impela bekusemsebenzini wami, - yebo. - Iminyaka engama-20 noma ngaphezulu.
Kepha ososayensi bezemidlalo bebekhuluma ngalokhu amashumi amaningi eminyaka. Ngicabanga ukuthi ucwaningo ku-2017 lukhomba ekudleni okuphezulu kwamaprotheni. Futhi mhlawumbe ekudleni okuphansi kwe-carbohydrate.
Noma empeleni ekudleni okwenziwe nge-carbohydrate, yithi amaprotheni aphezulu ngokungaguquki nsuku zonke. - Yebo. - Awusoze wahlehla emaprotheni. - Kulungile - Kepha okukhohlisayo ibhalansi yamandla.
Futhi indlela osebenzisa ngayo ibhalansi yamandla ngokukhohlisa ukudla kwakho kwe-carbohydrate. futhi kwezinye izinsuku uzobe uphethiloli ngalezo zinsuku ezingaba zinde kodwa zingabi namandla. Futhi lapho unganciphisa inani lama-carbohydrate.
Kepha amaprotheni ahlala njalo engaguquki. Futhi ngicabanga ukuthi ososayensi abaningi abavocavoca umzimba namuhla bangavumelana nezinzuzo zesisindo sokudla esinamaprotheni aphezulu. Ngakho-ke, sizobe sisebenzisa isayensi eningi ekuzivocavoca umzimba, ama-whey protein supplements.
Ama-Protein Ahlukanisiwe Esinawo emabhayisikili ethu. Amaprotheni asebusuku esinabo ngaphambi kokulala. Nginomkhiqizo we-Whey 20, ocishe ufane nejeli yamaprotheni.
Singayisebenzisa emabhayisikili kakhulu. Ngakho-ke uma sibheka umshayeli angadinga ukuthi adle amaprotheni ayi-180g ngosuku ngakho-ke sizozama ukukugcizelela lokhu lapho sidla, hhayi ngokulula kuphela kepha nangekhwalithi njengoba le mikhiqizo eminingi yamaprotheni icebile ngama-amino acid angukhiye wangempela. - Impela. - Ngemuva kwalokho sizokwandisa ukudla kwamaprotheni nsuku zonke nemikhiqizo ye-SIS.
Futhi bonke abashayeli bathenga lokhu, ngiqonde ukuthi, bayayithanda kakhulu le mikhiqizo. Futhi okubaluleke kakhulu, bayazibona izinzuzo zakho. Manje umbuzo owodwa futhi lapho ababukeli bethu abaningi bebuka lezi zihloko bezama ukunciphisa umzimba.
Bekulokhu kuyisihloko esikhulu kwezamabhayisikili, ngaso sonke isikhathi kuzoba yisihloko esikhulu Ukwehlisa isisindo kancane, uthole okuthe xaxa ebhayisikili. Ngakho-ke yiziphi izeluleko ezimbili ezibalulekile kothile obuka lokhu ukuze alahlekelwe isisindo ngokuphepha nangempumelelo? - Ngicabanga ukuthi ngizohlose ukunciphisa umzimba kancane kancane. Ngakho-ke noma kunjalo, ungalahli ngaphezu kwephawundi ngesonto ngokushesha okukhulu, kepha kulapho izinkinga zivame ukuqala.
Ngakho ngangisho kancane kancane. Ngokubona kwami ​​kanye nocwaningo lwami kanye nesipiliyoni sokwenza kwami, isu lokudla okunempilo elisetshenzisiwe yilona eliqukethe amaprotheni amaningi kunabantu abadlayo; futhi impela ama-carbohydrate amancane kunalokho okujwayele ukukudla. Kepha qiniseka ukuthi usebenzisa ama-carbohydrate ngesikhathi sokusebenza okubalulekile.
Futhi qiniseka ukuthi uzisebenzisela wena ngophethiloli wosuku lomjaho womsebenzi okhokhelwayo. -Kulungile--Ngamanye amagama, uma unosuku olude, olunzima esihlalweni bese ulwenzela uphethiloli.
Futhi uma ungenalo usuku olude nolunzima esihlalweni, khona-ke awunawo uphethiloli. - Kulungile. James Morton, ngiyabonga kakhulu.
Amathiphu aphezulu, ngiyabonga. Hhayi-ke, amanye amaphuzu athakazelisayo, athakazelisayo engiwaziyo akhanyisa isigaba samazwana. Futhi uma ufuna ukubamba iqhaza, shiya imibono yakho ngezansi.
Uma ungakabhaliseli i-GCN, ungakwenza lokho ngokuchofoza i-globe noma yikuphi esikrinini. Kumahhala ngokuphelele futhi ngaleyo ndlela ngeke uphuthelwe enye indatshana ye-GCN. Yebo, ukuthola ama-athikili wokudla okunempilo wokuthi ungachofoza kanjani lapha ukuze ufunde ukuthi mangaki amakhalori owashisayo ngenkathi uhamba ngebhayisikili, Amathiphu Wokudla Okuyimfihlo Wethimba Sky.
Futhi ungakhohlwa ukuthanda nokwabelana ngalo mbhalo futhi.
Ngabe unganciphisa isisindo ngokuhamba ngebhayisikili nje?
Ukuhamba ngebhayisikilikungumthelela ophansi, ukuzivocavoca okuguqukayocanshisa ama-calories ngesilinganiso sama-calories angu-400-750 ngehora, kuye ngokuthiisisindoyomgibeli, isivinini nohlobo lweuhamba ngebhayisikilingiyakwenza.Disemba 27 2018
Kuyini ukudla kwebhayisikili?
Carbukuhamba ngebhayisikiliindlela yokudla lapho ushintsha khona ukudla i-carb nsuku zonke, masonto onke noma ngenyanga. Ijwayele ukusetshenziselwa ukulahla amafutha, ukugcina ukusebenza komzimba ngenkathi udla ukudla, noma ukunqoba ithafa lokulahlekelwa isisindo.Juni 12. 2017 Nov.
Uhambo olukhulu luwukukhuthazela okumangazayo nokwenziwa kwamandla futhi lubeka izimfuno eziphakeme kubagibeli ababaphonsayo. Ngakolunye uhlangothi, abasubathi badinga uphethiloli omningi ukuze bathole 'cishe amakhilomitha ayizinkulungwane ezintathu nohhafu' ngejubane elijwayelekile elingaphezu kwamakhilomitha ayizinkulungwane ezintathu nengxenye, amamayela angama-25 ngehora. Kepha ohlangothini lwe-flip, abafuni ukudla ngokweqile ukuze banciphise amandla abo esilinganisweni sesisindo, okubaluleke kakhulu lapho uhamba ngebhayisikili. (I-Dramatic Music) Weza eGiro d'Italiato ukuthola okwengeziwe, ekhuluma noNigel Mitchell, isazi sezokudla seThimba Le-EF Education First Pro, futhi usebenze ngokusemthethweni neTeam Sky e-UK ngebhayisikili. okwathi ngelinye ilanga wazuza impumelelo enkulu ohambweni olukhulu, emijahweni, konke okuhle kakhulu kumabhayisikili abasezingeni eliphakeme.
Ngakho-ke ungumlingani ofanele wengxoxo. Ngifuna nje ukwazi ukuthi abashayeli bangaba nayo yini uphudingi. Ake sithole. (umculo okhululekile) Sawubona, Nige. - Kuhle ukukubona, Riley. - Yebo, ake siqale usuku. - Kulungile. - Ukudla kwasekuseni.
Yini abagibeli abavame ukuyidla ekuqaleni, ngaphambi kwesiteji? - Yebo, esigabeni esivamile abantu abaningi bayamangala ukuthi kudla okungakanani, ukudla esikwenzela abashayeli.Nginenhlanhla enkulu ngoba sinompheki omuhle no-Olga futhi ubaluleke kakhulu ilungu leqembu. Kubaluleke kakhulu.
Ungomunye wabantu bokuqala abavuka futhi owokugcina ukulala, kepha kulula kakhulu. Sizokuqala ngephalishi, sihlala sinalo iphalishi - ngiyalithanda iphalishi. (Ehleka) - Uhlala unephuthu futhi njengathi, iresiphi elula nje u-Olga ayisebenzisa lapho yenziwa khona ngamanzi nje. ungafaki i-whisky kuyo.
Asinayo i-whisky nokhilimu, engicabanga ukuthi ingumfana wendabuko waseScotland, akunjalo? lapho ngiseScotland noma kunjalo. Ngakho-ke sinephalishi futhi sinama-omelets. Yiba nama-omelets njalo.
U-Olga uzobala ukuthi mangaki amaqanda angadlula enhlokodolobha i-T Ours futhi kungamakhulu. Amakhulu namakhulu amaqanda. Futhi-ke konke esinakho kungokusanhlamvu okujwayelekile, sinoshizi, sinejamu, kuyinto evamile nje, izinto ezilula. - Yebo.
Sizama ukungahambi kakhulu ngesidlo sasekuseni, ikakhulukazi ngoba lapho-ke ugcwalisa uhlelo kuphela ngama-carbohydrate amaningi, amaningi, futhi ofuna ukukwenza ukugcwalisa nje uhlelo. - Kulungile. - Kepha nawe ngokunjalo.Uma ufuna okuthile lapho okuzoba khona, zinike isikhathi ukugaya futhi yingakho amaqanda elungele ukudla kwasekuseni ngoba amaqanda agaywa kancane kancane, afaka namaprotheni athile ohlelweni, ukuze uma bejaha kusiza abashayeli ukuthi balulame ngenkathi bedlula. - Ukufaka isandla njalo ekululameni - Yebo, kepha kumane nje kuyinto ejwayelekile, ukudla okulula. - Yebo. - Abantu bahlala bethi, 'Cha, angeke kube lula kangako, ngeke kube lula kangako. '- Gi Ngabe lukhona uhlobo oluthile lwamaprotheni, ama-carbohydrate, lolo hlobo lwe-macronutrient ofuna ukuluzuza? - Yebo, ngakho-ke esikufunayo ngokokubuka kwamaprotheni kukhomba cishe amagremu angama-20 wamaprotheni, abiza amagremu angama-20 kuye kwangama-30 ukudla abanakho kwasekuseni, ngakho-ke uyazi, ama-omelets amaqanda ambalwa, iphalishi abalidlayo , mhlawumbe kancane ham.
Lokho kubanikeza kalula amagremu angama-30 wamaprotheni abalulekile, futhi ngokubuka kwe-carbohydrate, sibheka ngempela igremu ngekhilogremu ngalinye lesisindo somzimba, futhi futhi, lokho kulula ukukufeza ngaphandle kokungena emininingwaneni. Ngephalishi nje, isithelo esisodwa, kulula impela ukuthi bakwenze ngaphandle kokucabanga ngakho futhi lowo ngumqondo wangempela. Ngizozama ukucabanga ngalezi servings.
Ngisho noma sinciphisa phansi induku, izinto ezinjenge-carbohydrate. Sizama ukugcina inani lingaguquguquki. Lokho kungama-gramu angama-20 kuye kwangama-30 ngalezi zidlo. (Umculo ophilayo) - Futhi ushilo ukuthi kwehlukile ngesigaba esifushane, njenge-TT - Yebo - ngakho-ke kusebenza kanjani? - Ngakho-ke i-TT, enye yezinto ezibucayi, enye yezinto ezibaluleke kakhulu, enye yezinto ezibucayi kakhulu induduzo yesisu, futhi-ke lokho kuyisimo esibi kakhulu lapho uku-skis ubuyela emuva ngakho-ke kuya ngokuthi isikhathi sesivivinyo kodwa uyazi, imvamisa abafana bayasukuma lapho isivivinyo sesikhathi sakho singo-2 ekuseni futhi bazoba nesidlo sasekuseni esijwayelekile kepha izingxenye ezithile ezilula kancane ukugibela, okunye ukuhlola bese kuthi, amahora amathathu, amane ngaphambi kwe-TT, kube khona isidlo somjaho kanye ne- pre- Sihlala sinokudla okufanayo komjaho.
Kuyirayisi kuphela ne-omelette - Uma siphuma esiteji, abagibeli badlani ngesikhathi sesiteji? - Ngakho-ke phakathi nesigaba sihlose ukukufeza, ngokuya ngamandla, futhi lokhu kuyingxenye yokuqeqeshwa abagibeli okufanele bazicabangele bona ngoba awukwazi ukutshela noma ngubani ukuthi kufanele ube namagremu amaningi ama-carbohydrate ngehora ngoba ngamandla abangawaqeqesha ngakho kwesinye isikhathi ungaba nabantu ababuyayo futhi ubheke amafayili kagesi futhi akudingeki ukuthi basebenze kanzima futhi unezinye izinsuku lapho behamba khona ngokugcwele ngokugcwele ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke thina? Uma ugibela ngokulinganisela, zama ukusebenzela ukuhlose ama-gramu angama-40 kuye kwangama-60 ama-carbohydrate ngehora. Uma usebenza kanzima, kusondele kuma-60 kuye ku-80, kuze kufike ku-100 amagremu ngehora. futhi indlela esiletha ngayo umsoco emabhayisikili ifana nohlelo lwe-modular.
Ngakho-ke sisebenzela uhlobo oluthile lokushintshaniswa kwe-carbohydrate engu-20 gram, uma ungiqonda. Njengekhekhe lelayisi elinama-gramu angama-20 ama-carbohydrate, ibha ifana no-40 amagremu ama-carbohydrate, ngakho-ke lokho kungukushintshana okubili. Ngokuya ngesiphuzo esisisebenzisayo, kungenzeka ukuthi sisebenzisa isiphuzo esingu-80-gram carbohydrate, ngakho-ke lokho kushintshana okune ngakho-ke sisebenza kulolo hlobo lohlelo.
Angicabangi ukuthi abashayeli bahlale bekuqonda ngokugcwele lokhu. - Yebo, kodwa uyakubuka - Kodwa siyazi, ngakho-ke siya lapho unebhodlela lalo - S o uma unebhodlela elingu-80 gram ngokwanele ihora, futhi sithambekele ekusebenziseni okuningi kwalokhu kudla ketshezi ketshezi lapho izigaba zisebenza kakhulu, ezintabeni lapho kunzima kakhulu ukukudla, noma kamuva ezigabeni, ngakho-ke ekuqaleni kwesigaba, kuya kulokho okwenziwa ngabashayeli, singaba nebhodlela lamanzi nebhodlela lesiphuzo sokugijima kuphela emabhodleleni.
Isiphuzo sokujaha iScratch esinama-gramu angama-20 ama-carbohydrate. Kungenzeka ukuthi bazobe sebenza imisebenzi yabo kusenesikhathi, noma bazi ukuthi kufanele basebenze, ngakho-ke sizosebenzisa ama-gramu angama-80 ama-carbohydrate emabhodleleni abo ngakho-ke sizoyibiza kancane ngalokho bese zijwayelekile kakhulu ngokudla komjaho esikusebenzisayo. Ngakho-ke sisebenzisa inhlanganisela yemigoqo yokuhweba futhi sisebenzisa namakhekhe erayisi.
Kuyinto yokuphakela komjaho enkulu kunazo zonke, ethandwa kakhulu, futhi esebenza kahle kakhulu laphaya. (umculo okhululekile) - Into engifuna ukukhuluma ngayo yizinsalela zokudla. - Kulungile, yebo - Ngoba ushilo okuthile ngokugwema ukudla komshayeli okwenza ukuthi kugcinwe amanzi amaningi emathunjini - Akulona ukugcinwa kwamanzi okungaka, kuningi kakhulu indle yendle, ngakho-ke ikakhulukazi kukholoni yethu, abantu abakhulu, kuningi okukhona, ngakho-ke ungaba namakhilogremu ambalwa endle emathunjini.
Ngiqonde ukuthi, kufanele uqaphele kahle nge-microbiome, amabhaktheriya, kubalulekile ukuthi singakwenzi, ukuthi singadlali ngakho kakhulu, ngakho kwesinye isikhathi sikwenzela izigaba ezithile futhi asikwenzi ' sikwenze konke Isikhathi nabo bonke abashayeli, empeleni kulapho abantu befuna okuthile ikakhulukazi futhi siyakwenza, sisekela uhlelo lwensalela ephansi ngakho-ke sikhipha kuphela ukudla umzimba ongakugayi ngempela, kodwa esikwenzayo kusafanele kuqinisekiswe Ukuthi sithola enye ifayibha encibilikayo ukondla amabhaktheriya, ngakho-ke asigweme yonke ifayibha, kepha sizama ukukugwema okuningi - Okuningi o Lokho esingakucabanga nge-fiber eyakha ngempela leyo mass Broccoli noma into enjalo? - Yebo futhi, noma isinkwa se-oatmeal, ngakho-ke uhlobo lokudla olulula impela olumayelana nokudla inkukhu nelayisi noma inhlanzi nelayisi bese n kukhona amajusi wemifino ongahamba nawo. - Kulula ukugaya. ezinye izinto ngakho ukuthi, ikakhulukazi uma usevikini lokugcina lohambo olukhulu, uhlelo lokugaya ukudla luyaqhubeka.
Ukukhathala, abashayeli badla u-ulethisi omningi, okuningi kakhulu kunalokho obekungadliwa abantu abajwayelekile, ngakho-ke ngayo yonke ifayibha ungathola ukubila emathunjini, ngakho-ke futhi ngezinto ezifana neziphuzo zemifino, empeleni izakhamzimba ukugxilisa eyodwa Khipha iningi lesisindo. (Umculo Othandwayo) - Kushintshe kanjani lokho selokhu ungene kwezokugibela ibhayisikili nokudla okunomsoco? - Yebo, ngicabanga ukuthi kube nezinguquko ezinkulu. Ngisho, nganginenhlanhla enhle ngenkathi ngise-cycc yeWorld Tour Level. ngize ling ngoba bengijoyina iqembu elisha sha ngakho-ke ngangena esibhakabhakeni seqembu lapho saba nethuba lokubhala kabusha imithetho futhi bekuyingozi encane kakhulu kulesi simo njengoba besingabanjwanga amasiko athile, ngakho-ke singazama lokho sizame ngempela nokuthi yini esifuna ukuyenza esebenza njengamanje.
Iningi lemikhuba esiyenzayo ngalo manje yilokho engikwethule eminyakeni eyi-10 eyedlule. Izinto ziqhubekile, kepha esikubonayo manje, iningi lamanye amaqembu selisebenzise okuningi kwalolo vivinyo, ngakho-ke izinto ngokujwayelekile zisanda kuqhubekela phambili, ngakho-ke enye yezinto ezinkulu emuva ngaleso sikhathi, izinto ezifana ne-pasta zathola kusetshenziswa kakhulu ibhayisikili kusetshenziswa okuningi kakhulu manje. Futhi, wonke amaqembu ayakwenza lokhu.
Izinto ezifana ne-juicing. Uyazi ukuthi ugijima ezindaweni zokudlela futhi ubona amaqembu amaningi enza i-juicing manje. Izinto ezinjengamaqebelengwane erayisi angikwazi ukuthatha isikweletu esigcwele ngoba empeleni kwakungu-Alan Lib owenza iresiphi kugogo wakhe mayelana noDoyi.
Wenze into efana naleyo minyaka edlule, futhi kwakunguBrad Wiggins owathi kimi, 'O, Alan wenza lezo zinhlobo' zezinduku ezinhle ngempela ngebhayisikili. 'Ngakho-ke sithathe ezinye zalezi zokupheka sazilungisa futhi wonke amaqembu enza lokho manje futhi uyazi, u-Alan ungitshela ukuthi ngenkathi esengumgibeli wamabhayisikili okhokhelwayo eminyakeni eyi-15 eyedlule, abantu bamgcona ngokuhamba nompheki wakhe welayisi. Abantu bathathe uMickey futhi manje iqembu ngalinye linabapheki belayisi abane noma abahlanu.
Ngakho-ke kube khona lezi zinguquko futhi ngicabanga ukuthi ukugxila kwikhwalithi yokudla kunamandla kakhulu kunaseminyakeni eyi-10 eyedlule. Wonke amaqembu manje anompheki. Amaqembu manje asebenzisa umuntu onendima yokudla okunomsoco obhekele kokubili imisebenzi yamasu nokusebenza kokudla nokondleka ngaphakathi eqenjini.
Ikhwalithi yemikhiqizo yokudla okunempilo ikhule ngempela ngombono wami, kepha ngicabanga ukuthi ubuhlakani ekusebenziseni imikhiqizo buthuthukile ngoba Angicabangi ukuthi abantu bayagijima nje, kuzofanele sisebenzise la mabha, kufanele sisebenzise ama-gel, ukusebenzisa lezi ziphuzo, manje sesicabanga ukuthi siyini isixazululo esizwakalayo kulokho esifuna ukukwenza, ngakho-ke sicabanga ukuthi iyini inkinga nokuthi ungayixazulula kanjani le nkinga, hhayi lokho okumele sikwenze esikuphonsa nje it bese uzama ukuyenza isebenze. (Umculo odumile) - Ngabe zikhona izinto ezifakwa ohlwini lwabantu abamnyama ongeke ube nazo? - Indlela engisebenza ngayo ukuthi angiyithandi ngempela indlela yokufunda, okuhle, okubi. Engithanda ukukuzama ukukwenza ukuthi Kulungile, sikholelwa ukuthi lokhu kusekela indawo yokusebenza, kusekela ukudla okudliwayo, ngakho-ke ukudla esingakuniki abashayeli, uma lokho kuyinto abayifunayo ngempela bangakuthola kepha thina asikudingi ' nginqabe - yebo. - Uma ukuqondo lokho engikushoyo.
Ngakho-ke uma umshayeli ehleli lapho edla noma ephuza, ngeke simehlulele ngakho. Lokho kungukukhetha kwethu, ngakho-ke ngicabanga ukuthi ukuphela kwezinto esizigwema ngempela njengeqembu, ngaphandle kwezigaba zezintaba, ngakho-ke siqonde ngqo ebhayisikili, sigwema izinto ezifana neziphuzo ezibandayo. Uyazi ama-colas - Bekade bethandwa kakhulu esikhathini esedlule. - Yebo, cha, cha, ngiqonde ukuthi aziwa kakhulu, kepha isizathu sokuwagwema yingoba iziphuzo ziphansi kakhulu ku-pH nokuthi yini esizama ukuyivikela abashayeli 'izinhlelo zokugaya ukudla ngesikhathi somjaho futhi lapho sinokudla okuningi okune-asidi kungathinta indlela amasistimu ethu okugaya asebenza ngayo ikani likalamula kodwa isizathu sokuthi singakuniki abashayeli yingoba lokho esizama ukukusho ukuthi lokhu akusekeli esikufunayo ukufeza ihhotela, ungathi, 'oh nkosi ngiyayidinga impela ikani' ngakho-ke hamba uyolithola kepha asikubeki njengeqembu Kuyatholakala, kepha sisebenzisa okuncane okufika ezigabeni zezintaba ngoba lokho kungasindisa ngengqondo abanye babagibeli, noma ngabe akusekeli konke esikwenzayo, kepha kulesi simo kusekela ukusebenza kwabafana futhi ukuphela kwendlela okuthola okuningi ongakwenza yisho ukuthi awukwazi. - Yebo, kunjalo.
eshibhile ibhayisikili kagesi
Ngiyabonga kakhulu ngalokho. Ingxoxo enhle nawe njalonjalo futhi yebo, iyathandeka ngempela. - Kulungile. - Ngiyabonga kakhulu ngalokhu.
Ngibonga uNigel ngokuqonda kwakhe ukuthi abagibeli abangochwepheshe badlani. Ngicabanga ukuthi kuyathakazelisa ngempela futhi ngicabanga ukuthi imiyalezo yokuthatha ukuthi uzodla izinhlobo eziningi, ukudla okuningi kwangempela okulula ukukugaya, kepha futhi kuyasebenza lapho kufanele uphinde wenze izinto ezindaweni ongazijwayele noma ngebhayisikili lakho. Kuyathakazelisa impela ukubona ukuthi abaqeqeshi kanye nezazi zokudla babheka izidingo zomzimba zosuku ngalunye ngoba izinsuku zivame ukwehluka futhi nedatha yokusebenza nokudla komthungi okususelwe kukho akuphelele.
Ngiyethemba uthole ukuthi le ndatshana iyathakazelisa futhi ifundisa, futhi uma ukwenzile ngicela uyinike isithupha bese ubhalisela i-GCN uma ungakakwenzi lokho.
Inani lamakhalori owashisayo kunoma yikuphi ukuvivinya umzimba lincike ekujuleni nobude besikhathi owenza ngaso. Ngenjwayelo,egijimaisha ama-calories amaningiukwedlula ukuhamba ngebhayisikilingoba isebenzisa imisipha eminingi. Noma kunjalo,ukuhamba ngebhayisikiliUmnene emzimbeni, futhi ungakwazi ukukwenza isikhathi esidenomaNgokusheshakuneungakwazigijima.UJan 21 2020 g.
Kufanele ngijikeleze malini ngosuku ukunciphisa umzimba?
Ukuqina, ukulinganiselaukuhamba ngebhayisikilikusha ama-calories angama-300 ngemizuzu engama-60, kodwa ungakwaziukushangaphezu kwalokho uma ukwandisa umfutho. Eqinisweni, ngokwe-Harvard Health Letter, umuntu ongamakhilogremu ayi-155 angakwaziukushanjengobaezininginjengama-calories angu-298 kumzuzu ongu-30ibhayisikiliukugibela, uma behamba ngejubane le-12-to-13.9 mile-ngehora ngalinye.Julayi 17 2020 g.
Ukuhamba ngebhayisikilinsuku zonkekuhle uma wenziwe ngezinga elifanele lokuqina futhi uma umzimba wakho unesikhathi esanele sokululama. Abagibeli bamabhayisikili abancintisanayo badinga izinsuku zokululama ngenxa yokuqina koqeqesho lwabo kanye nemijaho, kuyilapho abagibeli bamabhayisikili abangajwayelekile bengakwaziumjikelezongaphandle kokuthatha izinsuku.Ephreli 26 2021
Yini eshisa ukuhamba kakhulu noma ukuhamba ngebhayisikili?
Ukuhamba ngebhayisikili kusha kakhuluama-calories
Isilinganisoukuhambaisivinini se-5 km / h (3 mph) senza umuntu ojwayelekileukushacishe 232 kcal ngehora.Ukuhamba ngebhayisikilingejubane elilinganayo lama-20 km / h (12 mph)ukushacishe 563 kcal ngehora. Futhi umehluko mkhulu kakhulu uma sikhuphula umfutho.Okthoba 17 2018
Ingabe ukuzivocavoca ngebhayisikili nsuku zonke kwanele?
TOnsuku zonkeukugibela umjikelezo wemizuzu engama-20 ngukwaneleukuhlala uphilile. Okuvamileukuhamba ngebhayisikiliisiza ekushiseni cishe ama-calories ayi-1 000 ngesonto, ngishoukuhamba ngebhayisikilingejubane elincane le-12 mph kuzokusiza ukuthi ushise ama-calories angama-563 ngehora, kusho ucwaningo. Ukungasebenzi ngokwanele kungenye yezinto eziholela engcupheni yokufa emhlabeni wonke.Agasti 12 2017